Atụmatụ N'ihi Western Europe Site Train Na 2 izu | Save A Train
Home > Travel Europe > Atụmatụ N'ihi Western Europe Site Train Na 2 izu
Nwụchiri a map nke Europe na-ekpebi ebe aga nwere ike ịbụ a nro! Ee, karịsịa ma ọ bụrụ niile ị wee na-a di na nwunye nke izu. On a Afrika otú iche iche ma ọgaranya omenala, izu abụọ nwere ike iyi mkpụmkpụ! Ya mere, ọ bụ eleghị anya kasị mma ka ha kee na gara kpọmkwem mpaghara kwa njem. Otú ahụ na ị na-enye onwe gị oge zuru ezu na ohere ghọtara ihe ọ bụla na mba nwere na-enye. Western Europe ụgbọ okporo ígwè ebe dị mma na-amalite, na ihe mma ụzọ njem karịa ụgbọ okporo ígwè!
Mere gaa Western Europe ụgbọ okporo ígwè?
aga Western Europe ụgbọ okporo ígwè bụ ihe magburu onwe ahụmahụ dị ka njikọ via okporo ígwè bụ mma! Nke a na-eme ka Western Europe ụgbọ okporo ígwè na ahụmahụ a ọnụ ala ma na-adaba adaba nhọrọ nleta na-adịru nke izu abụọ. Otu a nke mba a maara nke ọma n'ihi na ya ketara mikpuru n'akụkọ ihe mere eme, art, na ịrịba ije! Nri ha agwaogwa bụ otú iche iche na ị ga-ahụ na ọ fọrọ nke nta-agaghị ekwe omume iguzogide eri ihe niile na-abịa ụzọ gị. Western Europe iche obibia oge a ndụ ga-ahapụ gị mesmerized ka ị hapụ onwe gị na nightlife na ọnọdụ.
Lee ụfọdụ n'ime anyị n'elu họpụta mmadụ ka ị malitere.
Mara maka ya biya, waffles, na chocolate, Belgium bụ akụkụ nke anyị na Western Europe Site Train njem bụ ihe n'akwụsịghị akwụsị na-adọrọ mmasị n'ebe ileta. Si ya na; pubs, ọtụtụ ngosi ihe mgbe ochie, ịrịba ama kanaal tours na mgbagwoju anya ije, mba a nwere ọtụtụ ihe na-enye. Ọ bụrụ na ị na-ekpebi gaa nnọọ Belgium kama na-aga gburugburu, na ịga na mba osimiri – ha fabulous!
Olee ebe onye na-amalite? The wine, na nri ma ọ bụ na-art? The mgbe niile egbu maramara French inyom? ma ọ bụ na maa mma ikom? na n'elu 30 nde mba ọzọ ọbịa kwa afọ, na City of Ìhè awade a njem ahụmahụ n'adịghị ihe ọ bụla ọzọ. Gịnị ma i wepụta oge ịgagharị ọtụtụ ngosi ihe mgbe ochie, ụlọ oriri na ọṅụṅụ, na ụlọ ahịa? Ma ọ bụ gbapụ n'ime ime obodo, enwe ma ama French osimiri, ma na-a na-eme njem gaa na ha ọmarịcha ugwu? Ee! A bonus akụkụ? The okporo ígwè njikọ na-phenomenal! Makụọ Western Europe ụgbọ okporo ígwè na ị ga-ahụ ihe anyị na-ekwu okwu banyere!
Ọdụ ụgbọ elu nke Lyon ruo Bordeaux train
Anyị na-emechi mba maka Western Europe Site Train bụ Switzerland
Ejegharị ejegharị na-Switzerland bụ mgbe a ezi echiche. Ejegharị ejegharị na-Switzerland ụgbọ okporo ígwè bụ ihe ọbụna mma otu. Ọ bụghị nanị na ndị Swiss ụgbọ oloko họọrọ dị ka ndị kasị mma na Europe, ọ bụ nakwa otu n'ime kacha mma anyị hụtụrụla mba ileta ụgbọ okporo ígwè. Switzerland bụ n'ụlọ ka ụfọdụ nke Europe kasị mara mma ọdọ mmiri, ndị kasị ama ugwu, na chocolate emeso. Ya omenala di iche iche bụ pụtara! na n'elu 200 mba, nke a bụ maa a ebe nke ga-enye ọhụrụ nghọta na ahụmahụ na n'akụkụ ọ bụla.
Western Europe ụgbọ okporo ígwè ahụmahụ anọwo na-abawanye na Western Europe kemgbe afọ iri. Mgbe ọ tụlesịrị ihe nanị ole na ole si mba ndị na mpaghara nwere na-enye, ọ bụghị n'ezie siri ike iche na ihe mere. The ugboro ugboro na a pụrụ ịdabere na njikọ eme njem mfe na oru oma, n'ezie. Ya mere, ọ bụ ugbu a dị nnọọ ruo gị aka ikpebi ebe na mgbe na-aga.
Iji Zọpụta-A-Train ka akwụkwọ gị ụgbọ okporo ígwè tiketi na ọnụ udu. Gaa ọ bụla ebe napụla jọgburu ntinye akwụkwọ ụgwọ! Ịgagharị Western Europe ụgbọ okporo ígwè dịtụbeghị mfe, na na anyị na nzọ ndị izu abụọ ga-ofufe site!
Ị chọrọ Embed anyị blog post jidesie gị na saịtị, wee pịa ebe a: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fwestern-europe-train%2F%3Flang%3Dig- (Pịgharịa gaa na ala ịhụ Embed Usoro)
europetravel Train Travel njegharị travelfrance travelswitzerland traveltips